Motorola ကသူ့ရဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားမော်ဒယ်သစ် Moto X4 ကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ် Gadget သတင်း
Motorola သည်၎င်း၏အလယ်အလတ်တန်းစားမော်ဒယ်သစ် Moto X4 ကိုတင်ဆက်သည်
Motorola သည်စျေးကွက်အသစ်၌ဆိပ်ကမ်းအသစ်များကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်သည်။ မြောက်အမေရိကကုမ္ပဏီသည်ယခုဂျပန် Lenovo မှပိုင်ဆိုင်ကြောင်းသတိရပါ။ သူသည်ဤဌာနခွဲအသစ်ကိုလွတ်လပ်စွာလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးသူ၌ကိုယ်ပိုင်မိုဘိုင်းဌာနခွဲရှိသည်။ အခုတော့အလှည့်ပါ မော်တာရိုလာ moto x4.
ဤမိုဘိုင်းဖုန်းသစ်သည်ကဏ္ of ၏အလယ်အလတ်တန်းစားသို့အပြည့်အဝဝင်ရောက်လာသည်။ အခုတော့ Motorola လိုပဲပြောစရာတွေအများကြီးပါလိမ့်မယ်။ ဒါပါ Motorola Moto X4 သည်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ကိုယ်ထည်နှင့်နောက်ဘက်နောက်ကင်မရာကိုလောင်းနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာလက်ရှိလမ်းကြောင်းသစ်ကို လိုက်၍ စျေးကွက်ဝေစုရရှိရန် bandwagon ကိုခုန်ပါ။ ယခုစျေးနှုန်းသည်၎င်းနှင့်ပါ ၀ င်မှုရှိ၊ မရှိနှင့် ၄ င်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများတသမတ်တည်းရှိ၊
1 Full HD display နှင့် IP68 အသိအမှတ်ပြုကိုယ်ထည်
2 အလယ်အလတ်တန်းစား Qualcomm ပရိုဆက်ဆာနှင့် 3GB RAM ကို
3 ဖက်ရှင်ကင်မရာ - 'selfies' အတွက် dual-sensor နှင့်အစွမ်းထက်သောရှေ့ကင်မရာ
Full HD display နှင့် IP68 အသိအမှတ်ပြုကိုယ်ထည်
ဒီ Motorola Moto X4 အသစ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပြောပြချင်ပါတယ် ၎င်း၏မျက်နှာပြင်ထောင့်ဖြတ် 5,2 လက်မရောက်ရှိ။ ၎င်းသည်စျေးကွက်တွင်အကြီးမားဆုံးပစ္စည်းတစ်ခုမဟုတ်နိုင်သော်လည်း ၆ လက်မနီးကပ်သောမျက်နှာပြင်ကိုလူတိုင်းမလိုအပ်ပါ။ အလားတူပင် resolution ကတော့ Full HD ပါ။ ဖန်သားပြင်ငယ်များတွင်အရည်အသွေးရှိသောအကြောင်းအရာများကိုခံစားနိုင်ရန်အတွက်များစွာသော pixels များမလိုအပ်ပါ။ သို့သော်ကဏ္ sector သည် QHD ဖန်သားပြင်များနှင့်ပြည့်နေကြောင်းသိထားလျှင်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်တိုတောင်းပေမည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒီ၏ကိုယ်ထည် Motorola Moto X4 သည်ဖုန်မှုန့်နှင့်ရေစိုခံနိုင်သည်။ ၎င်းသည် IP68 အသိအမှတ်ပြုထားသောကြောင့်၎င်းကိုရေအောက်တွင်နက်ရှိုင်းစွာအနက် ၁.၅ မီတာဖြင့်မိနစ် ၃၀ အတွင်းနစ်မြုပ်နိုင်သည်။ ဤကိန်းဂဏန်းများအပြီးတွင်ထုတ်လုပ်သူသည်ပစ္စည်းကိရိယာ၏ချွတ်ယွင်းမှုအတွက်တာ ၀ န်မရှိပါ။ အခြားမော်ဒယ်များတွင်ဖြစ်လေ့ရှိသည့်အရာနှင့်မတူဘဲ၊ ဤ Motorola Moto X1,5 ၏လက်ဗွေဖတ်စက်ကိုအရှေ့ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။
အလယ်အလတ်တန်းစား Qualcomm ပရိုဆက်ဆာနှင့် 3GB RAM ကို
ကွန်ပျူတာအားအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ထားသောချစ်ပ်နှင့် ပတ်သက်၍ Lenovo သည်နာမည်ကြီးသော Qualcomm မှချစ်ပ်တစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ပိုပြီးတိတိကျကျပြောရရင်တော့အဲဒါကိုဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ် Snapdragon 630 သည်ပရိုဆက်ဆာ ၈ လုံးနှင့် 8 GHz ကြိမ်နှုန်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းချစ်ပ်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၌ Snapdragon 2017 အဟောင်းကိုအစားထိုးရန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်သော RAM နှင့် LTE ကွန်ယက်များနှင့်လိုက်ဖက်သော။
ဤအတောအတွင်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက် Motorola Moto X4 သည်3GB တပ်ဆင်ထားကြောင်း RAM မှတ်ဥာဏ်ရှိသည်။ ဒါဟာယခုအချိန်တွင်အမြင့်ဆုံးကိန်းဂဏန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင်တရုတ်ရွေးချယ်စရာတွေအတွက် memory ပိုများတဲ့မော်ဒယ်တွေကိုရှာတွေ့နိုင်တာပေါ့။ သို့သော်အမှန်စင်စစ် Android နှင့်3GB RAM သုံး၍ terminal သည်အလွန်သွက်လက်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကကမ်းလှမ်းသိုလှောင်နေရာ စမတ်ဖုန်း Motorola မှာaသိုလှောင်မှုပမာဏ 32 GB ရှိသော်လည်း2TB အထိသိုလှောင်နိုင်သည့် microSD ကဒ်ပြားကိုသုံးနိုင်သည်.
ဖက်ရှင်ကင်မရာ - 'selfies' အတွက် dual-sensor နှင့်အစွမ်းထက်သောရှေ့ကင်မရာ
ဤ Motorola Moto X4 အသစ်၏ Premiere အတွက်ကုမ္ပဏီသည်နှစ်ကြိမ်တိုင်မထင်ခဲ့ပါ။ ၎င်းတို့သည်နိုင်သည့်ပုံသေနည်းကိုတိုက်ရိုက်လောင်းခြင်းဖြစ်သည် dual- အာရုံခံကိရိယာနောက်ဘက်ကင်မရာ။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင် resolution သည် 12 megapixels ရှိပြီး 8 megapixels ရှိသည်။ ရလဒ်အားလုံးကိုတွေ့မြင်ရ ဦး မည်ဖြစ်သော်လည်းမည်သူကိုမျှမချစ်တော့ပါ။ ဒီကင်မရာလည်း ဗွီဒီယိုများကိုသင်ရိုက်ကူးနိုင်ပြီး၎င်းသည်အမြင့်ဆုံး 4k resolution ဖြင့် ၃၀ တွင်ရိုက်ကူးနိုင်သည် fps.
ဤအတောအတွင်းရှေ့ကင်မရာအစွမ်းထက်သည်။ ပြီးတော့ selfies ကိုယူတာကအဖိုးမဖြတ်နိုင်တာပါ။ ထို့ကြောင့်ဤကင်မရာ၏အာရုံခံကိရိယာရှိသည် ၂၁ megapixel resolution ရှိပါတယ် နှင့်တစ် ဦး ကို flash နဲ့လိုက်ပါသွားသည်။
ကောင်းစွာသူ့ဟာသူရောင်းဖို့, အ Motorola Moto X4 သည်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ရမည်။ ချိတ်ဆက်မှုအပိုင်းတွင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောတိုင်ကြားချက်များမရှိပါ။ Terminal သည်နောက်ဆုံးပေါ် 4G ကွန်ယက်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် Bluetooth 5.0 (သုံးစွဲမှုနည်းပါးခြင်း)၊ မြန်နှုန်းမြင့် WiFi နှင့် NFC (ငွေပေးချေမှုနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်) ကဲ့သို့သောနည်းပညာများလည်းရှိသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရနေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်ပအရံပစ္စည်းများကိုအားသွင်းရန်သို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် ၃.၅ မီလီမီတာ audio jack နှင့် USB-C port တစ်ခုရှိလိမ့်မည်။
operating system အတွက်မူ Android သည် Motorola အကွာအဝေးတစ်ခုလုံးတွင်အကာအကွယ်ပေးသူဖြစ်သည်။ ဒီသတ်သတ်မှတ်မှတ်အမှု၌သင်ဗားရှင်းရပါလိမ့်မယ် အန်းဒရွိုက် 7.1 Nougat။ အထက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အထက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သတိပေးခဲ့သည့်အတိုင်း - ၎င်းသည်စိတ်ကြိုက်အလွှာနှင့်မပါ ၀ င်ပါက၎င်းသည်စင်ကြယ်သော Android ဖြစ်သည်။
မိုဘိုင်းကောင်းတစ်လုံးသည်အနည်းဆုံးတစ်နေ့လုံးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပေးရမည်ဖြစ်ပြီးပလပ်ကိုဖြတ်စရာမလိုဘဲပေးရမည်။ ဒီ Motorola Moto X4 ကအလိုရှိသည်။ ၎င်း၏ဘက်ထရီသည်စွမ်းဆောင်ရည် 3.000 milliamps ရှိသည် ပြီးတော့၎င်းမှာစျေးကွက်ထဲမှာအကြီးမားဆုံးမျက်နှာပြင်မရှိတာသတိရပါ။ ထို့အပြင် အကယ်၍ သင်ဟာအထူးအသုံးပြုသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသင်ဟာတစ်ရက်တောင်မပြည့်ဘဲဘက်ထရီကို 'သောက်' သူများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်, the Motorola Moto X4 သည်လျင်မြန်စွာအားသွင်းနိုင်သည် ၎င်းသည်သင့်အား ၆ မိနစ်အလိုအလျောက်လုပ်နိုင်သောအားဖြင့် ၁၅ မိနစ်သာခံနိုင်သည်။
နောက်ဆုံး၌ Motorola Moto X4 ကိုဥရောပဈေးကွက်အချို့တွင်စက်တင်ဘာလတွင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်အမေရိကန်နှင့်အာရှရောက်လိမ့်မည်။ Y ၄ င်း၏ရောင်းဈေးမှာယူရို ၃၉၉ ဖြစ်သည်.
ပိုမိုသိရှိလိုပါက: Motorola က
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » Motorola သည်၎င်း၏အလယ်အလတ်တန်းစားမော်ဒယ်သစ် Moto X4 ကိုတင်ဆက်သည်
Kirin 970 သည် Artificial Intelligence ယူနစ်ပါသည့်ပထမဆုံးပရိုဆက်ဆာဖြစ်သည်